Alarobia, Desambra 16, 2020 Alarobia, Desambra 16, 2020 Liza Nebel
Isan-taona, indrindra rehefa manakaiky ny fialantsasatra isika ary misaintsaina ireo fampielezan-kevitra tsy hay hadinoina indrindra tamin'ny taona, misy ady marobe tsy hita isa izay marika nahasarika ny mpanatrika. Miaraka amin'ny fihenjanana sy tsy fahatokisan-tena nateraky ny areti-mandringana tamin'ity taona ity, misy ady vaovao, ary ady ho an'ny fahasalamantsika ity indray mitoraka ity. Rehefa nifanaraka tamin'ny fanaovanay ny zava-drehetra avy tao an-trano izahay, dia nahita ny fomba nanentanan'ny areti-mandringana ny ho avin'ny fahasalamanana. Fitaovana an-trano marani-tsaina toa
Herintaona izay vao nanamboatra ny tranokalanay WordPress farany aho. Na dia tiako aza ny layout, nanana plugins sy namboarina aho mba hampandehanana azy io araka ny nitiavako azy koa. Miaraka amin'ny WordPress, izay afaka manomboka manonona ny loza avy amin'ny fomba fijery ary hitako ny triatra tao amin'ny fototra. Noho izany, nandeha nitady famolavolana izay afaka mampiditra fampisehoana lehibe sy lehibe aho